Orthophos 3D X-Ray | OptiSmile ™ Yepamberi Dentistry Cape Town
X-Rays Mune Matatu Matatu
Kuva nemazino X-ray anotorwa anogona kazhinji kuita chikamu chekushanya kwemazino. Icho chinhu chinonyanya kukosha chinoonekwa chinogona kubatsira chiremba wemazino kumisikidza mamiriro emazino uye zvinyama zvisingaonekwe panguva yekuongororwa kwemuromo. Ivo vanowanzo shanda mukutsvaga matambudziko angangoitika, vasati vatanga kukonzera matambudziko makuru.
Sechikamu chekuzvipira kwedu kugara kumberi kwekuvandudzwa kwemazino, tinofamba uko tekinoroji inotitora. Kuva neyako yekutanga yeOrthophos x-ray zvishandiso mupasi isungano kuzvipira uku. Iyo Orthophos SL 3D ndiyo yedu hombe yekudyara mune yemazino mazino kusvika nhasi. Iyo 360 ° digital x-ray scanner iyo inogadzira iyo inopinza mifananidzo inowanikwa. Izvi zvinotibvumidza isu kuti tipe mhedziso yakanakisa kurudziro uye kuchengetedza kunogoneka Maitiro aya anogona kupedzwa paOptiSmile uye inopa mhedzisiro yekukurumidza kuona.
Ndeipi Inoda 3D X-Rays?
Kazhinji isu tinokurudzira kuti iwe uve nemaX-ray akaitwa mune zvinotevera zviitiko:
Kana paine nzvimbo dzemuromo dzinoda kuongororwa nekuti bvunzo yemumuromo yaisakwanisa kupa ruzivo rwakakwana
Pamberi pekunyanyisa mazino ekuzora maitiro ekubatsira pamwe nekugadzirira kwema implant, veneers, dentures kana brace
Tsvaga uye uratidze kurasikirwa kwepfupa kwakabatana nechirwere chemazino kana shanduko kune chimiro chemapfupa nekuda kwehutachiona
Zivisa chinzvimbo chemamota kana cysts
Tsvaga chaiko nzvimbo yemamota mumuromo
Tarisa uone kana paine nzvimbo yakakwana mumuromo wemunhu kuti ikwane mazino ari kuuya
Tarisa kuvandudzwa kwemazino ehungwaru kuti uone kana akanganiswa kana kwete
Chii Chinoitika Panguva Yeiyo 3D X-ray Maitiro?
Paunouya kuzokurangana naOptiSmile, chiremba wako wemazino anozotaura newe nezve hutano hwako uye mazino uye / kana chero marongero ekushambadzira mazino aungave uchitova nawo mupfungwa. Izvi zvingangoteverwa nekuongororwa kwemazino mushure meizvozvo X-ray inogona kukurudzirwa kubatsira chiremba wako wemazino kusarudza nzira yekurapa yakanakisa. Iyo 3D X-ray Process inoshanda seinotevera:
Uchishandisa tekinoroji inonzi mazino koni danda computed tomography (CBCT), zviuru zvemifananidzo midiki zvinogadzirwa apo iyo Orthophos zvakachengeteka uye zvine runyararo inoita yakazara yekutenderera kutenderedza pamuromo wako
Mifananidzo chaiyo yakanyatsoiswa pamwechete kuti igadzire yakajeka x-ray pikicha kana 3D mufananidzo.
Uyu mufananidzo unobva waiswa ipapo kumakomputa edu uchishandisa yakakosha software kuti iwe ugone kuona iyo mifananidzo nesu.
Nei Uchiuya kuOptiSmile
OptiSmile ndeimwe yemaitiro ekutanga emazino ekushandisa iyo Orthopos 3D Dental X-rays. Izvi zvinoreva kuti kana iwe ukashanyira maitiro edu unenge uchive uchibatsirwa neyakanakisa ekuongorora mazino emidziyo pasi. Kuve zvirinani, zvigadzirwa zvemberi zvekuona zvatinazvo zvinotibvumidza isu kuita kurudziro zvichibva pamifananidzo yakanyanyisa kukwira.
Kunze kwekungove chakanyatsoongorora chishandiso, iyo 3D X-ray tekinoroji inoshandiswa naOptiSmile inoshanda pamwe chete ne CEREC & Digital Smile Design, ayo ari maviri matekinoroji anoshandiswa nesu kubatsira mukuvandudza nzira dzekudzoreredza, dzinosanganisira implants uye veneers.
Icho chokwadi chekuti isu tine mazhinji eaya matekinoroji aripo, zvinoreva kuti isu tinokwanisa kukupa iwe yakanakisa emazino kunyemwerera mhinduro pasina kudzoka kune akawanda maapoinzi. Isu tinoita huwandu hwakawanda hwemaitiro, kubva pane zvakajairwa kusvika kune epamberi ekuzora maitiro. Kana iwe uchida kuwana rumwe ruzivo nezve maitiro edu kana uchida kuseta musangano, unogona kuzviita kuburikidza neWhatsApp, foni kana email. Isu takagadzirira kupindura chero mibvunzo yaungave unayo.